China Spout pouches-B orinasa sy mpanamboatra | Hong Bang
Kitapo fonosana plastika
kitapo fonosana saron-tava
Kitapo tsanganana rivotra
Kitapo fonosana taratasy
Kitapo taratasy fotsy misy paosy ambany ambany
Kitapo Kraft Paper ho an'ny fonosana kafe sy dite
Sarimihetsika vita pirinty vita amin'ny plastika vita pirinty ho an'ny fiara ...
Horonantsary vita amin'ny plastika vita pirinty vita amin'ny plastika vita pirinty
Kitapo ambany vita amin'ny Kraft Paper Flat
Kitapo ambany sy hijoro
Tombony amin'ny paoketra spout
Ny paosin'ny spout dia fanavaozana ny maody famonosana izay famolavolana manokana ho an'ny vokatra miorina amin'ny ranon-javatra. Ny antony ao ambadiky ny fanekena ireo paosy misy spouted ireo dia ny famolavolana mpampiasa azy izay mifanentana amin'ny fitahirizana ranon-javatra, pasty na akora malalaka be. Ankoatr'izay, raha ampitahaina amin'ny tavoahangy PET na vera mahazatra, mora kokoa ny paosika amam-borona ho an'ny fitaterana ary tonga lafatra amin'ny talantalana antsinjarany. Ampiasaina matetika amin'ny vokatra toy ny fanasana lamba amin'ny solika, jelly zazakely, sakafo ranon-javatra, zava-pisotro mangatsiaka ary kojakoja fidiovana sns.
Ny paosy misy spouted dia azo akatona indray ary novokarina niaraka tamin'ny spout weld sy cap. Ireo spout ireo dia azo hamolavola ho an'ny fifehezana, fanamorana sy fiarovana ary mety ho an'ny vokatra isan-karazany toy ny zava-pisotro, saosy na mpitsabo mpanadio. Ny habe sy ny endrika dia azo namboarina araka izay ilain'ny mpanjifa sy takiana.
Pack Smart koa dia manome paosy misy spouted izay misy fitambarana sy fanidiana arakaraka ny famaritana ireo vokatra marobe.
Volavola sy namboarina
Ity ny fonosana HONGBANG. Izahay dia manome vahaolana isan-kitapo fonosana sakafo ho an'ny filàna sy fampiharana isan-karazany. Lazao anay ny zavatra takianay fa ho hitanay ny filanareo rehetra. Tsy mamokatra vokatra izahay ary manandrana mitarika anao hanaraka azy ireo; mihaino ny filanao sy ny fanavaozana injeniera izahay izay hamaha ny olanao amin'ny fonosana.
Feature sy Opiont
Vivi Fanontana, glossy na matte vita
Caps Spout sy Anti-mitelina
Mitsangàna na fisaka
Firafitra mahazatra (Fitaovana) an'ny Poutches misy spouted
Layer ivelany: Mamela ny fanaovana pirinty ny sary, mitondra dokam-barotra izay mampita hafatra marika ary mahasarika ny mpanjifa.
Layer afovoany: Leak-proof, ary miasa ho toy ny sakana fiarovana mba hiantohana ny fihazonana ny atin'ny kitapo ho azo antoka sy vaovao.
Layer anaty: Ny sosona lehibe indrindra amin'ireo telo. Ity sosona ity dia ankatoavina amin'ny alàlan'ny FDA mba hiantohana fa azo antoka ny sakafo rehefa mifandray amin'ny fonosana. Azo fehezina ihany koa izy io hanomezana toky ny mpanjifa fa tsy nisy nanodinkodina ilay paosy.
Vokatra pasty sy ranoka
Vokatra an-trano sy zaridaina
Vokatra fahasalamana sy hatsarana
Fonosana indostrialy sy hafa
Customization Andao hifandray
Teo aloha: Paosin'ny spout
Manaraka: Spout Pouch-C
Kitapo mijoro manokana
Flexiable Stand Up Pouch
Kitapo mitsangana plastika
Horonantsary vita pirinty vita amin'ny plastika vita pirinty ho an'ny ...
Kitapo amin'ny rivotra
Adiresy: Room 607, tranobe C, xiangzhigu, 58 NANLIAN Road, Distrikan'i Longgang, Kota Shenzhen, faritanin'i Guangdong
Ny fanantenana ho an'ny kitapo taratasy kraft
Fampirantiana iraisam-pirenena fonosana any Indonezia
Fanontana sy fonosana iraisam-pirenena Hong Kong ...
© Zon'ny mpamorona - 2021-2023: Voatahiry ny Zo rehetra.